MacBook ama MacBook Air: labada midkee baa igu habboon aniga? | Wararka Gadget
Paul Aparicio | | Apple, Kumbuyuutarro, Laptops
Iibso a laptop inta badan maahan hawl fudud. Maxaan ku salaynaynaa inaan go'aansano hal nooc ama mid kale? Qiimo? Awooda sawirada? Miisaanka? Nidaamka qalliinka la jaan qaadi kara? Dhibaatadu way ka sii weyn tahay haddii aan iibsaneyno PC, laakiin qalad ma sameyn doonno, tan uma dhahayo sababtoo ah waan ka soo horjeedaa (waxaan haystaa mid Ubuntu leh), haddii kale maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo laga doorto.
Haddii waxa aad rabto ay yihiin Mac ma jiraan noocyo badan, laakiin mid kasta oo ka mid ah waxaan ku leenahay qaabab kala duwan. Si loo caddeeyo dhammaan shakigaaga, qodobkaan wuxuu ku saabsan yahay isbarbardhigga u dhexeeya MacBook iyo MacBook Air, laba kambuyuutar oo kambuyuutarrada ugu fudud Apple ka ah ayaa fool ka fool isu hor dhigay.
Tilmaamahan yar ee MacBook vs. MacBook Air waxaan ka hadli doonaa farqiga u dhexeeya labada nooc laptop Waxaa jira qaar muhiim ah oo ah, illaa iyo inta Apple uusan baabi'inayn qaabka hawada gebi ahaanba, waxay umuuqataa inay had iyo jeer halkaas joogi doonaan. Anaga oo aan sii ambaqaadin, waxa aan bilaabeynaa in aan ka hadalno waxa ku kala duwan labada laptops.
1 Dhibcaha guud ee u dhexeeya MacBook iyo MacBook Air
1.1 Nidaamka hawlgalka
1.2 Isku xirka wireless-ka
1.3 Kiiboodhka, kaliya qaabkiisa
2 MacBook vs MacBook Air: kala duwanaanshaha
2.1 Shaashad, cabir iyo culeys
2.2 Dakadaha ayaa lagu daray
2.3 Kiiboodhka: farsamada dhaqameed vs. hab balanbaalis
Dhibcaha guud ee u dhexeeya MacBook iyo MacBook Air
Sida kiniiniyada, qalabka saacadaha iyo macruufka, dhammaan kombiyuutarada Apple waxay adeegsadaan isla nidaamka qalliinka. Haddii aan iibsanno MacBook ama MacBook Air hadda, labadooduba waxay la soo bixi doonaan OS X El Capitan 10.11. Haddii aan ka iibsanno laga bilaabo Oktoobar, waxay la imaan doonaan macOS Sierra. Dhinaca kale, maanka ku hay in MacBook-ka uu ka casrisan yahay, sidaa darteed waxay u badan tahay in la cusbooneysiin karo sanad kale marka loo eego MacBook Air.
ka xiriirada labada kombiyuutar Way siman yihiin, oo tan waxaa ka mid ah WiFi iyo Bluetooth. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, MacBook-gu waa kombiyuutar casri ah oo inkasta oo astaamaha ay bixiyaan ay isku mid yihiin, MacBookga waxay u badan tahay inuu leeyahay qaybo casri ah, laakiin tani waa inaysan noqon mid la ogaan karo (ama aanba ahayn).
Kiiboodhka, kaliya qaabkiisa
Labadoodaba teebabka waa 79 fure, oo leh 12 fure oo ficil ah (Fx) iyo afar fallaaro ah si loo dhaqaajiyo calaamadda (ama loo xakameeyo ciyaaraha qaar). Iyaguna waa gadaal gadaal, wax la mahadiyo hadaan rabno inaan si hoose ku qorno. Kala duwanaanshaha, sida aan gadaal ka sharixi doonno, waxay la xiriiraan qaabeynta / nidaamka.
MacBook vs MacBook Air: kala duwanaanshaha
Shaashad, cabir iyo culeys
Shaashadda labada qalab way ka duwan tahay. MacBook Air ayaa lagu heli karaa iyadoo 11.6 iyo 13.3 inji ahhalka MacBook uu leeyahay shaashad dhexdhexaad ah 12 inches. Labada laptop waxay isticmaalaan a iftiinka gadaashiisaLaakiin MacBookga cusubi wuxuu adeegsadaa muuqaalka 'Retina bandhigay' oo ku dhowaad laba jeer lagu xalliyo hawada MacBookga.
Dhinaca kale, MacBook-ga waa a runtii qalab fiican kaas oo loogu talagalay inaan markasta la qaadano hadaan la shaqeyno. Tani sidoo kale waxay leedahay dhinaceeda: qaar badan oo isku dayay oo ku tiirsaday lugahooda si ay wax uga soo qoraan fadhiga fadhiga, tusaale ahaan, waxay dhahaan waa dhaqaaqaysaa.
Dakadaha ayaa lagu daray
Tani waxay ahayd waxa ugu muranka badan ee ku saabsan soo bandhigida MacBook-ga cusub: kaliya ayaa leh dekedda USB-C. Way cadahay inay tahay halbeega mustaqbalka oo ay ahayd inaan talaabada qaadno, laakiin dhibaatadu waxay tahay inay jirto hal kaliya oo dekeddaas waa inaan ku xirnaa dhinac walba, oo ay ku jiraan USB Pendrives. Waxaa jira qalab, laakiin maahan waxa ugu raaxada badan adduunka.
Dhinaca kale, MacBookga hawada ayaa leh laba dekedo 3 USB ah, Konfeedereyshanadaas qaylo iyo MagSafe, wax aan jeclayn soo bandhigida MacBook-kii ugu dambeeyay ee aan la joogin. Labaduba waxay leeyihiin cod maqal ah iyo wax soo saar jack jack.
Kiiboodhka: farsamada dhaqameed vs. hab balanbaalis
Si loo sameeyo MacBook-kan khafiifka ah, waxay ku khasbanaayeen inay wax badan ka beddelaan. Laptop-kii ugu dambeeyay ee Apple wuxuu leeyahay kiiboodhka oo leh farsamo balanbaalis (waxaa naqshadeeyay Apple) oo socdaalkiisa markii uu furaya furayaasha la yareeyay xitaa in ka badan haddii ay suurogal tahay. Waxaa la dhihi karaa isbeddelka kumbuyuutarka ee Mac Book Air iyo kan cusub ee MacBook wuxuu la mid yahay kan aan aragno markii aan ka soconeyno kumbuyuutarka kumbuyuutarka illaa kan Apple: safarku wuu yaraaday, marka hore waxay u muuqataa mid qaldan xitaa macquul, laakiin aakhirka waan la qabsanay mana dooneyno inaan dib ugu laabano teebabkaas oo umuuqda inay leeyihiin fureyaal sida buuraha.
Trackpad kumbuyuutarrada Apple waa wax lagu farxo. Waxaan u maleynayaa tan iyo markii aan isku dayay Magic Trackpad iMac. Waxaan dhihi karnaa Trackpad-ka MacBookga wuxuu u dhigmaa Magic Trackpad jiilka kowaad, halka midka MacBook uu yahay jiilka labaad. Jiilka koowaad waa a dusha taabashada badan taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan sameyno dhammaan tilmaamaha, iyo in ka badan oo aan isticmaali karno haddii aan rakibno qalab sida BetterTouchTool.
MacBook Trackpad wuxuu sameyn karaa wax kasta oo MacBookga uu sameyn karo, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay Teknolojiyada Force Touch in ay soo bandhigeen sanadkii 2014 iyaga iyo Apple Watch, taas oo ah, waxay ogaataa xoogga aan codsano markaan taabano. In kasta oo aanan hubin in tani loo baahan yahay, runtu waxay tahay inay bixiso fursado badan.
IPhone-ka ayaa ah midka bilaaba qaybo badan, shaqooyin iyo qeexitaano ay ku jiraan aaladaha Apple. Sanadkii 2013 iPhone 5s waxaa lagu soo bandhigay midab cusub, oo dahab ah, sanadkii 2015 iPhone 6s wuxuu ku yimid midab kale, dahab kor u kacay. Sidoo kale sanadkii 2015, ayaa MacBook afar midab: dahab, dahab kacay, meel cirro leh iyo lacag ama soo jireen ah. Dhinaca kale, ka MacBook Air waxaa lagu heli karaa oo keliya lacag caadi ah
Waxaan dhahnay ma bixin doonno xog laga yaabo inay duugowdo waqti kasta, laakiin aniga waxay ilatahay in qiimahan uu waligiis ahaan doono. Cabirka waa la bixiyaa, gaar ahaan haddii la dhimo. The MacBookga ayaa ka kharash badan MacBook Air in kasta oo xaqiiqda ah in waxqabadka labaad uu waxyar ka sarrayn doono kii hore ee loo adeegsaday processor-ka waxyar ka dhakhso badan. Xitaa way ka qaalisan tahay 13-inch MacBook Air ah.
Waxaan wajahaynaa laba laptop oo isku mid ah, laakiin isla markaa ka duwan. MacBookgu waa farshaxan heer sare ah, sidaas darteedna isagaa iska bixiya. MacBookga waa, tusaale, waa qaab duug ah, tanina waa mid mudan in maskaxda lagu hayo wararka soo cusbooneysiinta mustaqbalka maxaa yeelay waxay u egtahay in MacBook-ga loo cusbooneysiin doono ugu yaraan hal nooc oo ka badan kan MacBook Air. Haddii waxa aan raadineyno ay yihiin a waxqabadka wanaagsan y dekado badan oo caalami ah Qiimo jaban oo aan laga fekerin mustaqbalka, MacBook Air waa inuu noqdaa xulashadeenna. Hadaan rabno Mac microlight, naqshad, garaacista raaxada iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee Apple, oo noo xaqiijinaya taageero dheeri ah sanado badan, Macbook waa waxa aan raadineyno.
Ka dib markii our MacBook vs. MacBook Air, labada midkee ayaad xiiseeysaa: MacBook ama MacBook Air?
MacBook | Hadda iibso
Hawada MacBook | Hadda iibso
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Laptops » MacBook ama MacBook Air: labada midkee baa igu habboon aniga?
Waa inaan kugu saxaa xallinta MacBook-ka: shaashadda 'retina' ma leh "wax ka badan ama ka yar isla go'aan", waa ku dhowaad labalaab ... wayna muujineysaa.
13.3 ″ Milkiilaha MacBookga ayaa kuu sheegaya.
Iyo kiiboodhka, inaad laqabsatay "balanbaalis" oo aadan rabin wax kale, maxaa yeelay waa fikirkaaga-khibrad. Dad badan ayaa ka fikiraya uun taas ka soo horjeedkeeda maxaa yeelay iyagu kuma baran kumbuyuutar ku wareegsan oo aan duubid lahayn.
By habka, ka sii dhammaystiran, oo bilaash ah, BetterTouch waa MagicPrefs.
Go'aan isku mid ah oo aan kaftamin. Haddii MacBookga uu la mid yahay MacBook waxaan u maleynayaa in qofna uusan iibsan doonin kan dambe?
Ku jawaab Cale